नेपाली चेली अनुष्का श्रेष्ठको अपिल: मिस वर्ल्ड जिताउन सहयोग र सेयर गर्नुस - Kavre Online
जसको लागि MOBSTAR! एप्स डाउन लोड गर्नुपर्नेछ । एप्स डाउन लोड गरिसकेपछि अनुष्का श्रेष्ठ सर्च गरि लाईक, शेयर गर्न सकिनेछ । जसले गर्दा भोट बढाउन सहयोग मिल्नेछ । यो जती धेरै लाईक अर्थात शेयर भयो त्यसलाई पनि मल्टीमिडिया अवार्ड छनौटमा एक आधार मानीने गरेको छ । यसरी गर्न सकिन्छ एप्स डाउनडोल गरि लाईक तथा शेयर
Prevयी हुन भाग्यमानी हुन चाहिने ५ गुण, तपाईंसँग कुन कुन छन् ?
Nextम्याग्दी बस दुर्घटनाकामा मृ*त्यु भएका चारै जनाको सनाखत, घाइतेको उपचार हुँदै
दसैँका लागि नयाँ नोट वितरण गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति तोक्यो, कतिसम्म निकाल्न पाइन्छ ?
विराटनगरमा डें*गुबाट कक्षा १२ मा अ*ध्ययनरत १८ वर्षीय अविनाशको मृ*त्यु
आफ्ना कारण ४० मिनेट उडान अवरुद्ध भएपछि मन्त्रीले दिएकी थिइन् राजीनामा